Jobho 5 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Erifazi anoenderera mberi achitaura (1-27)
‘Mwari anobata vakachenjera mukunyengera kwavo’ (13)
‘Jobho haafaniri kuramba kurangwa naMwari’ (17)
5 “Shevedza! Pane ari kukupindura here? Pavatsvene, uchaenda kune upi? 2 Nekuti kugumbuka kuchauraya munhu akapusa,Uye shanje dzichauraya munhu asina kungwara. 3 Ndakaona munhu akapusa achidzika midzi,Asi nzvimbo yake yaanogara yakazongova yakatukwa. 4 Vanakomana vake havana kana kuchengeteka,Uye vanopwanyirwa pagedhi reguta,+ pasina anovanunura. 5 Zvaanokohwa zvinodyiwa neane nzara,Zvichitorwa kunyange zviri pakati peminzwa,Uye zvinhu zvavo zvinoteyiwa. 6 Nekuti zvinhu zvinokuvadza hazvibudi muguruva,Uye dambudziko haribudi muvhu. 7 Nekuti nhamo inotouya pamunhu anenge aberekwa,Sezvinongoita moto unobvira uchiputika uchikwira mudenga. 8 Asi dai ndirini iwe ndaikwidza nyaya yangu kuna Mwari,Uye ndaipira nyaya yangu kuna Mwari, 9 Kuna iye anoita zvinhu zvikuru zvisingagoni kuongororwa,Zvinhu zvinoshamisa zvisingaverengeki. 10 Anonayisa mvura panyikaUye anotuma mvura paminda. 11 Anosimudza vakaderera,Uye anosimudza vakasuruvara kuti vaponeswe. 12 Anovhiringidza mazano evanyengeri,Kuti basa remaoko avo rirege kubudirira. 13 Anobata vakachenjera mukunyengera kwavo,+Kuti zvirongwa zvevakangwara zvisabudirire. 14 Vanosangana nerima masikati,Uye vanotsvangadzira masikati machena sekunge kuti usiku. 15 Anoponesa pabakatwa remiromo yavo,Achiponesa varombo paruoko rwevakasimba, 16 Kuti vakaderera vave netariro,Asi miromo yevasina kururama yovharwa. 17 Anofara munhu anotsiurwa naMwari;Saka usaramba kurangwa neWemasimbaose! 18 Nekuti anoita kuti pave nemarwadzo, asi anosunga ronda racho;Anokuvadza, asi anorapa nemaoko ake. 19 Achakununura pamatambudziko matanhatu,Kunyange dambudziko rechinomwe harizokukuvadzi. 20 Achakudzikinura parufu munguva yenzara,Uye pasimba rebakatwa munguva yehondo. 21 Uchadzivirirwa parurimi runotaura zvinorwadza,+Uye hauzotyi kuparadzwa pakunouya. 22 Uchaseka dambudziko uye nzara,Uye hauzotyi zvikara zvepanyika. 23 Nekuti matombo emusango haazokukuvadzi,*Uye zvikara zvemusango zvichava nerugare newe. 24 Uchaziva kuti tende rako rakachengeteka,*Uye hapana chauchawana chisipo paunoongorora mafuro ako. 25 Uchava nevana vakawanda,Uye vazukuru vako vachawanda seuswa hwepanyika. 26 Uchasvika pakuenda kuguva uchakasimba,Sezvisote zvegorosi zvinounganidzwa mumwaka wazvo. 27 Ona! Takazviongorora uye ndizvo zvazviri. Teerera, uzvibvume.”
^ Kana kuti “achaita sungano (chibvumirano) newe.”
^ ChiHeb., “tende rako rugare.”